Shabaab iyo Shacab ku dagaalamay Dhoobleey. – Hornafrik Media Network
Hornafrik-Wararka ka imaanaya duleedka degmada Dhoobleey ee gobalka Jubada Hoose ayaa soo sheegaya in maanta ay halkaasi ku dagaalameyn Shacab Xoolo dhaqato ah iyo Dagaalamayaasha Al-shabaab ee Jubada Hoose.
Dagaalka ayaa ka dhacay deegaan qiyaastii 70 KM u jira degmada Dhoobleey ee gobalka Jubada Hoose, waxaana ka dhashay Khasaare dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay.
Taliyaha degmada Dhoobleey ee gobalka Jubada Hoose Axmed C/llaahi Heybe ayaa KNN u sheegay in dadka ay ka caroodeen Lacagaha xad dhaafka ah oo ay ka qaadaan Shabaabka ku sugan gobalka taasini ay sababtay in shacabka ay dagaalamaan.
Al-shabaab ayaa inta badan goobaha ay joogaan shacabka ku nool ka qaada Lacago iyo Xoolo ay ku sheegeen SAKAWAAD waxayna arintaasi sababtay in deegaano badan ka dhacaan dagaal Al-shabaab ka dhan ah kaas oo u dhaxeeya dadka deegaanka iyo Al-shabaab.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Oo Goordhow Ka Duulay Garoonka Aadan-Cadde Ee Muqdisho.